ပို၍ကြီးသော ပြည်သူ့အင်အား (ဘာသာပြန် စာအုပ် ဒေါင်းလုပ်)
“ပြည်သူတွေက သူတို့လွတ်မြောက်ချင်တယ်လို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာနဲ့
သူတို့ကို တားဆီးနိုင်တဲ့အရာကိစ္စ ဘာမှ မရှိတော့ပါဘူး”
"When People decide they want to be free, There is nothing that can stop them."
Archbishop Desmond Tu Tu
ကျနော်တို့ မြန်မာအဆိုမှာလည်း ရှိပါတယ်။ “ပြည်တင်းရင် မင်းမခံနိုင်ပါ”တဲ့။ အကယ်၍ ပြည်သူတွေက ညီညွတ်လာကြတဲ့ အချိန်မျိုးမှာ ပြည်သူ့အင်အားဟာ အကြီးမားဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။ ဘယ်လိုတားဆီးမှုမျိုးကိုမှ ဘယ်လိုလက်နက်မျိုးကိုမှ ကရု မစိုက်ကြတော့ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာ့ပြည်သူတွေရဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် ဒီအချက်ဟာ အထင်အရှားတွေ့ရပါ တယ်။ အာဏာရှင်တွေက သူတို့ထာဝရ ချုပ်ကိုင်လို့ရကြမယ်လို့ ထင်ခဲ့ကြပါဘူးပါတယ်။ အမြဲတစေ ဗိုလ်ကျစိုးမိုးထားနိုင် မယ်လို့ ယူဆထားခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာတော့ သူတို့ အမှားကြီးမှားသွားပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အင်ပိုင်ယာတွေ ပြိုကျသွားပါတယ်။
ရာသက်ပန်သမတဆိုတဲ့ အီဒီအာမက်လိုမျိုး၊ ပီနိုရှေးလို သက်တော်ရှည်ခေါင်းဆောင်မျိုးလည်း မခံနိုင်ကြပါဘူး။ တခဏသာပဲ ရပ်တည်နိုင်ကြတာပါ။
အာဏာရှင်တွေအတွက် ခေတ်မရှိတော့ပါဘူး။ အထီးအကျန်ဆုံး လူသားတွေဟာ သူတို့တွေပါ။ ရာဇ၀င်ထဲမှာ သူတို့ကို ထားခဲ့ရပါတော့မယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က လူထုတွေကို အားပေးဖို့ စာအုပ်တအုပ် ဘာသာပြန်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ စာအုပ် အမည်က A Force More Powerful လို့ ခေါ်ပါတယ်။ “အရာအားလုံးထက် ပိုကြီးတဲ့ ပြည်သူ့အင်အား”လို့ ဘာသာပြန်ရမယ် ထင်ပါတယ်။ ရေးတဲ့သူတွေက ပီတာအက်ခမန် (Peter Ackermen) နဲ့ ဂျက် ဒူဝေါ (Jack Du Vall) တို့ပါ။ သူတို့က ပြီးခဲ့တဲ့ ရာစုနှစ် အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ လူထုတွေရဲ့ အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေကို လေ့လာမှတ်တမ်းတင်ပြီး ရေးသားထားတာ ပါ။ အကြမ်းမဖက် လှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် သမ္မာကျမ်းစာလို့တောင် ဆိုနိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် လူမှု အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှုတွေက အစ၊ အိန္ဒိယက ဂန္ဒီကြီး၊ အခြား ဒိန်းမတ်၊ ပိုလန်၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများက လေ့လာဖွယ် အဖြစ်အပျက်တွေ၊ သင်ခန်းစာယူစရာ အခြေအနေတွေ ပါပါတယ်။
ဒီစာအုပ်ကို ဘာသာပြန်ခဲ့သူတွေကတော့ ဆယ်ဦးခန့်ရှိပါလိမ့်မယ်။ အင်းဝအုပ်စုလို့ပဲ ဆိုကြပါစို့။ ကျနော်တို့ လူထုတွေ အတွက် ဒီစာအုပ်နဲ့ ဂုဏ်ပြုပါရစေ။ ဒီစာအုပ်ကို ဒီနေရာမှာ ဒေါင်းလုပ် လုပ်နိုင်ဖို့ စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။
၃။ အာဂျင်တီးနားနှင့် ချီလီပြည်သူများ လှုပ်ရှားမှု
၄။ မြန်မာ၊ ယူဂို ဆလားဗီးယား၊ ကော်ဆိုဗို ပြည်သူများ လှုပ်ရှားမှု
၅။ တရုတ်၊ အရှေ့ဥရောပ၊ မွန်ဂိုလီးယား ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုများ
၆။ ဒိန်းမတ် ပြည်သူများ လှုပ်ရှားမှု
၇။ ရိုတာဒမ်မှ ရိုဆန်ထရစ်သို့
၈။ အိန္ဒိယပြည်သူများနှင့် ဂန္ဒီကြီး
၁၀။ ပိုလန်နိုင်ငံ (၁)
၁၂။ ရုရှားနိုင်ငံ ပြည်သူများ
၁၃။ တောင်အာဖရိက အသားအရောင်ခွဲခြားမှု ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု
၁၄။ အမေရိကတိုက် တောင်ပိုင်း လူမှုအခွင့်အရေး လှုပ်ရှားမှု
၁၅။ အင်တီဖါဒါနဲ့ ပါလက်စတိုင်း
Thanks for sharing with us. But could you please repost for #3and #11 as links are broken.